Austin oo hoosta ka xariiqay muhiimadda saaxiibada gobolka Black Sea
Xoghayaha Difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin ayaa dhawaan booqday saddex waddan oo ku yaalla gobolka Badda Madow, Georgia, Ukraine, iyo Romania.
Wuxuu ammaanay iskaashiga xooggan ee dhanka amniga iyo qiyamka ay dalalku la wadaagaan Mareykanka. Waxa uu aqoonsaday naf-hurnimadii Georgia iyo Romania ay sameeyeen, gaar ahaan isbahaysiga ciidamadii ka dagaalamay Ciraaq iyo Afgaanistaan; waxaana uu ku celiyey taageerada Maraykanka ee madax-banaanida iyo wadajirka dhuleed ee saddexda waddan, maadaama ay weli la kulmayaan cadaadis uga imanaya hawlaha silloon ee dawladda Ruushka.
"In laga sheekeeyo ma aha in gobolku uu u nugul yahay gardarrada Ruushka, waxaanan aragnay caddaynta ficilada socda ee bariga Ukraine, qabsashada qaybo ka mid ah Georgia, militariga badda madow, iyo falalka xaaladda kicinaya ee hawada iyo badda." ” ayuu yiri Xoghaye Austin. "Dhaqdhaqaaqyada xasillooni-darrada ah ee Ruushka… waxay ka tarjumayaan hammiga dalkaas ee ah inay dib u soo ceshado jagada ugu sarreysa gobolka iyo inay ka hortagto xaqiijinta Yurub oo dhan, xor ah oo nabad ah."
Xoghaye Austin ayaa u sheegay warfidiyeenka in Maraykanku uu ku weyn yahay iskaashiga baaxadda leh ee uu ka helo wada-hawlgalayaashayada" gobolka, wuxuuna xusay in Maraykanku uu sii wadi doono bixinta kaalmada si kor loogu qaado awoodda badda ee Georgia, Ukraine, Romania, iyo sidoo kale Bulgaria, iyagoo taageeraya dadaallada lagu joojinayo lagana difaacayo dhaqdhaqaaqyada aan wanaagsaneyn ee Ruushka.
Booqashada Xoghaye Austin ee saddexda waddan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday danaha NATO ee amniga Badda Madow - Romania oo ah xulafada muhiimka ah ee NATO, iyo Ukraine iyo Georgia oo ah waddamo shuraako ah kuwaas oo rajaynaya xubinnimada NATO.
Xoghayaha Difaaca ayaa ugu yeeray Romania "tusaale muhiim ah oo loogu talagalay ballanqaadka Isbaheysiga ee wadaaga mas'uuliyadda, casriyeynta difaaca, iyo ka qayb qaadashada howlgallada NATO ee Yurub iyo wixii ka dambeeya." Waxa uu sidoo kale ku ammaanay Romania in ay ka mid tahay kuwa fara ku tiriska ah ee xulafada NATO ee martigeliya tiro badan oo ah ciidamo wareeg ah oo Maraykan ah.
Georgia iyo Ukrain, Xoghaye Austin wuxuu si cad u sheegay in xoojinta hay'adaha dimoqraadiyadda ay sidoo kale tahay gaashaan ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo gardarrada, wuxuuna ku dhiirri-galiyay labada dawladood inay raacaan dib-u-habeyn lagu horumarinayo hammigooda Euro-Atlantic.
"Amniga iyo xasiloonida Badda Madow waxay ku jiraan danta qaranka Mareykanka waxayna muhiim u yihiin amniga Garabyada Bari ee NATO," ayuu yiri Xoghaye Austin. "Isha ayaan ku sii hayn doonnaa, waxaana sii wadi doonaa inaan la shaqeyno saaxiibadayada gobolka."